I-AeroLeads: Chonga iidilesi zePosi eziLindelweyo ngePlagi ye-Chrome | Martech Zone
Nokuba ungakanani na umnatha womnatha wakho, kuhlala kubonakala ngathi awunakuba nakho ukunxibelelana okufanelekileyo. Ngokukodwa xa usebenza nemibutho emikhulu kakhulu. Iinkcukacha zoqhakamshelwano zihlala ziphelelwe lixesha-ngakumbi kuba amashishini anengeniso ebalulekileyo kubasebenzi.
Ukukwazi ukujonga ulwazi loqhakamshelwano ngexesha lokwenyani ukusuka kumthombo oqinileyo kubalulekile kwimizamo yakho yokuphuma. Iinqwelomoya yinkonzo ehamba neChannel Plugin ehamba nayo eyenza ukuba iqela lakho lokuthengisa lenze kanye loo nto.
AeroLeads ivumela abathengisi abaphumayo ukuba bakhangele abafowunelwa yinkampani okanye ngokusebenzisa iplagi yabo yeChannel- bamba ulwazi lwabo loqhakamshelwano olukwiziko ledatha labo kwaye linxulumene neprofayile yentlalo ojonge kuyo.
Sebenzisa iAeroleads Chrome Extension kulula:
Hlohla Ukwandiswa kwe-Chrome, yenze isebenze, kwaye ukhangele kwiAeroLeads, Google, LinkedIn, Crunchbase, AngelList, njl.
Khetha amathemba afanelekileyo kwaye uwagqithisele kwiAeroLeads kuluhlu lwethemba.
I-AeroLeads iya kulanda zonke iinkcukacha zeshishini okanye zomntu ezibandakanya i-imeyile, igama, inombolo yefowuni, kunye neeprofayili zentlalo.
Ungathumela noluhlu kwiCRM yangaphandle ukuba ungathanda ukwakha uluhlu lwethemba apho. Iinkcukacha zonxibelelwano zinikezelwa malunga ne- $ 0.50 ngerekhodi. Ungayivavanya iplagi eneekhredithi zasimahla ezili-10.
I-Aeroleads Khokelela kuDityaniso
I-Aeroleads ivelise indibaniselwano yokutyhala ulwazi lokunxibelelana ngqo kwiakhawunti yakho okanye kwezinye izixhobo, kubandakanya iMailchimp, iSalesforce, ngokuBonakalayo, iPipedrive, iZapier, iZoho, Hubspot, kunye neFreshSales.
Ukubhengezwa: Sisayinwe kunye AeroLeads kwaye sisebenzisa ikhonkco lokudibanisa kwiqhosha elingentla.
tags: iieroleadsApiuthenge idatha yoqhakamshelwanouthenge iirekhodi zethembaukongezwa kwe-chromechrome iplagikuluhlu lwabafowunelwafumana iinkcukacha zonxibelelwanoFreshsalesfumana iinkcukacha zonxibelelwanohubspotNgqiqoUluhlu apimailchimpukuphuma ngaphandleUmbhobhoUluhlu lwethembaukuthengisazapierZoho